AH Metal agbakọta Slurry mgbapụta - China JP Metal & Equipment
Introduction Type AH, HH, M nfuli na-cantilevered, kwụ, centrifugal slurry nfuli. Ha na-e na-ejizi abrasive ma ọ bụ corrosive slurry na Metallurgical, Ngwuputa, coal, ike, ewu ihe onwunwe na ndị ọzọ na ulo oru ngalaba wdg AH (R), HH na-akpọ oké ọrụ slurry nfuli, na-eji ibufe ike abrasive elu njupụta ma ọ bụ ala njupụta elu isi slurry. N'okpuru allowable nsogbu, nfuli nke ụdị nwekwara ike arụnyere na multistage usoro. HH ụdị Pu ...
FOB Price: US $ 1200-5500 / Ibe
Mini. Order: 1 Ibe
Tụkwasịnụ ikike: 5000 iberibe kwa Year
Ịkwụ Ụgwọ Okwu :: L / C, T / T, D / P, Western Union, ego gram
Akwụkwọ: ISO9001, SGS, OA
Pịnye AH, HH, M nfuli na-cantilevered, kwụ, centrifugal slurry nfuli. Ha na-e na-ejizi abrasive ma ọ bụ corrosive slurry na Metallurgical, Ngwuputa, coal, ike, ewu ihe onwunwe na ndị ọzọ na ulo oru ngalaba wdg
AH (R), HH na-akpọ oké ọrụ slurry nfuli, na-eji ibufe ike abrasive elu njupụta ma ọ bụ ala njupụta elu isi slurry. N'okpuru allowable nsogbu, nfuli nke ụdị nwekwara ike arụnyere na multistage usoro. HH ụdị mgbapụta bụ tumadi ji mee ihe iga ala njupụta elu isi ma ọ bụ elu njupụta ala abrasive elu isi slurry.
M (R) bụ ụdị n'etiti ọrụ slurry mgbapụta, a na-eji ibufe ezi urughuru size na n'etiti njupụta slurry.
The liner na impeller nke AH (R) na M (R) nlereanya nwere ike na-agbanwe agbanwe na ihe onwunwe pụrụ ma mgbochi abrasive metal ma ọ bụ roba, ma ihe nke liner na impeller nke HH nlereanya naanị nwere ike ịbụ metal version. Rubber ihe mmiri akụkụ na-bụ-eji maka izipu na slurry nke nwere ezi, na-abụghị nkọ urughuru size.
The aro akàrà maka ụdị AH (R), M (R) na HH nfuli nwere ike ịbụ adoptable nke gland akara, expeller akara na n'ibu akara. The-agbapụta n'ahụ nwere ike positioned na etiti oge nke 45 degrees site arịrịọ na gbakwasara ọ bụla asatọ ọnọdụ ona nrụnye na ngwa.
1. Ihapu alaka nwere ike positioned na etiti oge nke 45 ogo.
2. Ezi replaceability nke mmiri na mbụ mgbapụta.
3. na-eyi na-eguzogide metal na ogologo ọrụ ndụ oge.
4. Na ukwuu axial na radial ibu fim ikike,
5. Ihapu direction nwere ike arụnyere na etiti oge nke 45 degrees dị ka arịrịọ na gbakwasara ọ bụla asatọ ọnọdụ ona ngwa.
6. Ezu dị iche iche na-arụ ọrụ ọnọdụ.
7. Wide ngwa, elu arụmọrụ na mfe ịnọgide na-enwe.
8. Wide nhọrọ maka impeller.
9. agba nzukọ were griiz lubrication.
Nhọrọ Chart na Performance
mgbapụta Model Allowable Max. Power
ike Q Head
H (m) Speed ​​n (r / min) Max.Eff.
1. ikike iche na-atụ aro: 50% Q'≤Q≤110% Q '(Q' kwesịrị ekwesị na ike na kasị elu arụmọrụ ebe).
2. NPSH: kwesịrị ekwesị na-ezo Q na-atụ aro na kasị elu ọsọ
The AH ụdị slurry nfuli nwere mgbapụta ha ahụ na iso nke replaceable wear na-eguzogide metal iche iche ma ọ bụ na-eyi na-eguzogide roba iche iche, na impellers nwekwara ike ide wear na-eguzogide metal ihe onwunwe ma ọ bụ na-eyi na-eguzogide roba ihe onwunwe. The HH ụdị slurry nfuli naanị ide wear na-eguzogide metal ihe onwunwe dị ka ha mgbapụta ozu na impellers.
AH usoro slurry mgbapụta na ọtụtụ-eji nkà mmụta banyere ígwè, Ngwuputa, ịnweta nhazi, dredging, dewatering, na mmiri ọgwụ, coal ịsa, na nkume igwe nri, na naa ndepụta, tailing, ike, ewu ihe onwunwe ... etc. dị iche iche na ulo oru na saịtị. Anyị nfuli na-akpọ aha dị iche iche dị iche iche na-arụ ọrụ ọrụ: Ịnweta nhazi mgbapụta, Mill orùrù slurry mgbapụta, Booster mgbapụta, Nri mgbapụta, tailing mgbapụta, Nyefee mgbapụta Thickner Underflow mgbapụta, De-atọ ihuenyo mgbapụta, Pressure mgbapụta, Lekwasị mgbapụta ...
Centrifugal mgbapụta Manufacturers